Ukuphonononga i-OUKITEL WP2, enye erhabaxa nebhetri engenasiphelo | I-Androidsis
URafa Rodríguez Ballesteros | | Ibhetri, I-Oukitel, Reviews
Kwi-Androidsis asiyeki ukuzama ngazo zonke iintlobo zeegajethi. Mva nje siye sazama ukuzama zonke izinto; izithethi, iitshaja, ii-headphone ... kodwa kuyacaca ukuba eyona nto siyithanda kakhulu zii-smartphones. Ngeli xesha sikwazile ukuvavanya i-OUKITEL WP2 entsha.
Kwakhona kwisandla se-OUKITEL, kwaye kwakhona, ifowuni erhabaxa. Sele siyikhankanyile ngamanye amaxesha, iRugerizados zikwimfashini, kwaye nosapho lwayo aluyeki ukukhula. I-WP2 inempawu ezaneleyo zokubakho kulo naluphi na uluhlu lwezona zikhetho zibalaseleyo kushishino. Yithenge ngoku kwiAmazon Ngexabiso elifanelekileyo ngokuhambisa simahla ukusuka apha
1 I-OUKITEL WP2 erhabaxa ibhetri ngakumbi kwintengiso
2 Le yi-OUKITEL WP2
3 I-OUKITEL WP2 Unboxing
5 Isikrini esikhulu se-smartphone enkulu
6 Sijonga ngaphakathi kwe-OUKITEL WP2
7 I-Android 8.0 Oreo enebrashi yokubetha
8 Ukufota ekuphakameni okuseleyo
9 Ukusetyenziswa kwekhamera kunye nezinto ezinokwenzeka
10 Ibhetri ukunika kunye nokuthatha
11 Isandi kunye nokongezwa
11.1 Izinto ezongeziweyo ezidibanisa
12 "Ukulunga" kunye "neengozi" ze-OUKITEL WP2
13 Uluvo lomhleli
I-OUKITEL WP2 erhabaxa ibhetri ngakumbi kwintengiso
Yiyo umgangatho oqhelekileyo kuzo zonke Iifowuni ze-OUKITEL. Ngenjongo yokufumana uphawu oluqhelekileyo lwenkampani, ibonelela ngee-smartphones zayo iibhetri zesisa kakhulu oko kusoloko kutsala umdla. THE WP2 akukho ngaphandle, akukho nto iqhubekayo kwinyani, sithetha nge-smartphone engenanto ingaphantsi 10.000 mah ibhetri, ipasi elinye.
Kodwa kulungile ukuba unebhetri enkulu, ayisiyiyo kuphela into okanye eyona nto intle malunga nale OUKITEL WP2. Sijongene ne-rugerizado apho i-OUKITEL ibeke yonke inyama kwi-grill ukuze ikwazi ukukhuphisana nezinye ii-smartphones ezininzi ezinamagama amaninzi ngaphandle kwezakhiwo.
Omnye Iscreen se-intshi eyi-6, ikhamera yeefoto ezimbini, inkumbulo I-4GB ye-RAMt Ukugcinwa kwe64GBEwe ziyandiswa, zizizathu ezaneleyo zokuba sijonge ngokusondeleyo kule smartphone. Ukongeza kuyo yonke le nto ukuntywiliselwa emanzini, ukumelana nothuli kunye nezothuso. Ngaba ufuna ezinye izizathu zokuba ube nomdla kule OUKITEL WP2?
Le yi-OUKITEL WP2
Inkangeleko ebonakalayo ye-OUKITEL WP2 ihambelana kakhulu nezinye ezirhabaxa esinokuzifumana kwimarike. Ubukhulu obukhulu, iimilo ezi-angular, Elinye iphepha lesinyithi, kunye nobukho bezikrufu. Zonke zidityaniswe nokukhetha izixhobo zokuqhushumisa ibhombu. Sifumana IPolystyrene i-Ebonite kunye neFlexible Polystyrene Glue ayikhuseli nje kuphela emanzini, kodwa nakwimikrwelo kunye namaqhuma. Kodwa masiyibone ngenxalenye.
Ngaphambili, ubungakanani obukhulu bescreen sayo esine-intshi ezi-6 simi ngaphandle, esihlala kwindawo enkulu yepaneli yangaphambili. Nangona isagcina izakhelo ngaphakathi kwinxalenye yeglasi, ukongeza kwizakhelo ezibanzi eziqhelekileyo zomzimba wesixhobo. Emazantsi, ngentla nje kwe logo yokutyikitya yimakrofoni. Kwaye phezulu kwesikrini sifumana iisenzi, ikhamera ye-selfie kunye nesithethi seminxeba.
Kulo ezantsi i izibuko lemithwalo kunye nokunxibelelana nekhompyuter. Eli xesha limalunga Uhlobo C lwe-USB, Into exatyiswayo kwizixhobo ezitsha. Ukuze sikwazi ukubiza okanye ukuqhagamshela i-OUKITEL WP2 kufuneka sisuse ithebhu yerabha Esebenza ukugcina isixhobo i-hermetic. Kufuneka sitsho ukuba le thebhu ingasuswa ngokulula. Kwezinye ii-smartphones ezirhabaxa esikwazileyo ukuvavanya lo msebenzi ulula bekunzima kunokuba bekulindelwe.
Fumana i-OUKITEL WP2 Apha kwaye uyifumane ekhaya ngeentsuku ezi-6 ngokuhanjiswa simahla
Kulo icala lasekunene ukusuka kwi-WP2 sifumana into ethile, ngokoluvo lwethu, ibekwe endaweni engeyiyo. Phezulu yi iqhosha lolawulo lwevolumu. Kwaye ngezantsi kweqhosha Tshixa okanye uvule / ucime. Ukuza kuthi ga ngoku yonke into ngaphakathi kwesiqhelo. Kodwa kwakhona sifumana "ulingelo" esele lubonakalisiwe ngokwaneleyo ngamanye amaxesha ukuba aluphumelelanga.
Indawo ye-OUKITEL WP2 umfundi wakho weminwe kwicala lesixhobo, ngezantsi nje kweqhosha "lasekhaya". Indawo engonwabanga ekuqaleni kwi-smartphone enkulu, kwaye ukuba sidibanisa kule a ukufundwa kweminwe "kukungacaci", kude kuqatsele. Kubalulekile ukuba xa urekhoda iminwe sibeka umnwe kwindawo enye apho siza kuyibeka kunye ne-smartphone ngesandla.
Kulo icale lasekhohlo, Ukongeza kwizikrufu esizifumana kwicala lasekunene, kukho ifayile ye- ikhadi slot. Singafaka ikhadi ukuya kuthi ga SIM khadi ezimbini, kunye nememori khadi Micro SD. Esi slot, njengezibuko le-USB, likho ikhuselwe ngethebhu yerabha eqinisekisa ukukhuselwa emanzini.
La phezulu ifowuni ihleli igudile ngokupheleleyo. Isigqibo se cima izibuko ukufakwa kweefowuni jack encinci, Njengabavelisi abangakumbi nangakumbi abenza, yenza ezinye iindawo zingabinamaqhosha okanye amazibuko.
Kulo ngasemva ye-OUKITEL WP2 siyifumana ikhamera ezimbini kwindawo emi nkqo, yenye yezona zinto zinomtsalane kule smartphone. A isivamvo esisayinwe yi Samsung ibonelela ngantoni I-16 + 2 megapixels kwaye unakho ukubonelela ngeziphumo esiza kukuxelela kamva. Ikhamera ibekwe kwiphepha lesinyithi elihlulahlula kwezinye ngendlela eyoyikisayo.
Apha ngezantsi, sifumana ilitha lokuqala kwaye kubonakala kancinci ukuza kuthi ga ngoku. Imalunga ne- Isine esikhulu sokukhanya kwe-LED Iyakwazi ukukhanyisa ezona ndawo zinzima kwisitayile sefleshi yeekhamera ezinobuchule. Siyifumene kuvavanyo kwaye ihambisa ngcono kunoko kulindelweyo.
Emazantsi e ngasemva inga i-yakho isithethi esinye. Ayibonakali ukuba namandla ngaphezu komndilili, kodwa inika isandi esamkelekileyo ngamandla alungileyo kwaye ngaphandle kokugqwetha.
I-OUKITEL WP2 Unboxing
Eli lelinye lamaxesha ethu "angcwele" xa sifumana ismartphone. Kwi-unboxing yeWP2 siyifumana abanye kulindeleke ukuba bangabikho kunye nezimanga ezimbalwa. Sasiziqhelanisa nokubona ukuba mva nje sifumene enye into eyongezelelweyo okanye isincedisi ebesingenayo. Kodwa akukho nto ngeli xesha.
Xa uvula ibhokisi siyifumana ngaphambili, njengesiqhelo, i-smartphone uqobo. Ekubonweni kokuqala kubonakala enkulu, kwaye sakuba sikhuphe, pesado. Le ayisiyonto intsha, "iifowuni ezonakalisiweyo" ziimfonomfono kwaye zinzima, kwaye i-OUKITEL WP2 ayinjalo.
Kufuneka sitsho ukuba ukupakisha kulunge kakhulu. A ibhokisi emnyama emnyama. Kwaye ngaphakathi kuyo ezinye iibhokisi ezincinci ezinazo zonke izinto. Kwenye yazo i isinxibelelanisi sokutshaja kumbane wombane. Inqaku elinye ekuthandeni kukuba le iza kwifomathi yaseYurophu, into ebonakala isengqiqweni ayisoloko iyinyani.
Kwaye kwenye yeebhokisi ezincinci ngaphakathi sifumana iintambo ezininzi. Kukho ifayile ye- Intambo ye-USB njengoko sisazi ngonxibelelwano lwe-USB Uhlobo C. Sinefayile ye- iadaptha yokuqhagamshela ii-headphone kwizibuko elifanayo le-USB C, ngenxa yokungabikho kwesihlanganisi se-jack ye-3.5 mm. Kwaye ekugqibeleni nge intambo yintoni eza kukhonza ukuze i-OUKITEL WP2 isebenze njengebhetri yangaphandle ezinye izixhobo.
Akukho nto, kodwa ewe into encinci, ii-headphone. Asidinwa nakukuthi le nto kufuneka ibe yinto eyimfuneko. Kwaye nangona siqhubeka nokugxininisa koku, kubonakala ngathi iya iqheleka into ngaphandle kwabo.
Isikrini 6 intshi LCD IPS 1080 X 2160 FHD + Corning Gorilla Glass 2
Isaziso se-LED SI
Inkqubo I-MediaTek MT6750
Iminwe Ukuba ibekwe kwicala lasekunene
I-Radio yomsakazo Si
Cámara trasera isivamvo kabini nge-Samsung S5K2P7 nge-16 + 2 Mpx
Ikhamera yangaphambili isivamvo GalaxyCore GC8024
Ibhetri 10000 mah
Ubukhulu 85.0 x 172.0 x 13.0
U bunzima 300g
Ixabiso 289 €
Ikhonkco lokuthenga I-OUKITEL WP2
Isikrini esikhulu se-smartphone enkulu
I-OUKITEL WP2 iza ixhotyisiwe isikrini esivulekileyo se-intshi ezi-6. Into elingana kakuhle xa sijonga ubungakanani befowuni. Sele sikwazile ukuvavanya ezinye ezirhabaxa apho ubungakanani bescreen se-5 okanye i-intshi ye-5,5 ibincinci. Kule meko, isikrini sijongeka silungile kwisixhobo.
Inye Isikrini se-IPS LCD esisebenza kakuhle ngokulungileyo kakhulu isisombululo, 1080 x 2160 px, HD epheleleyo +. Ibe Ubungakanani beepikseli ezingama-402 nge-intshi nganye kunye nokuthinta okuninzi. Kwaye ngento esoloko sithanda ukuyifumana kwi-smartphone, i Ii-LED zesaziso.
Nangona kunjalo kunokwenzeka ukuba ukukhuselwa kwesikrini kunokuba yenye yeendawo ezibuthathaka. I-OUKITEL WP2 yi-smartphone efika kwimarike ngaphantsi kweenyanga ezimbini ezidlulileyo. Ke ngoko, banokhuseleko I-Gorilla Glass 2 ayenzi ngqondo ingako ukuba kungoku iya kuguqulelo 6. Ngakumbi kwimeko yeselfowuni ebekwe kwicandelo elibizwa ngokuba yimihlaba yonke.
El Ifomathi yesikrini eyi-18: 9 Kuyenzeka ukuba ubulele ubukhulu bayo be-intshi ezi-6. Ifomathi kunye nobukhulu obenza ukubukela uthotho lwethu oluthandayo kube mnandi nakwiselfowuni. Njengoko sibona, kwicandelo lesikrini kukho ikalika enye enye isanti.
Sijonga ngaphakathi kwe-OUKITEL WP2
Sibona indlela oluphakathi ngayo udidi olugqithisiweyo ngakumbi nangakumbi. Kulula ukufumana izixhobo zokutyikitya ezithobekileyo ezinamandla njengaso nasiphi na isiphelo esiphezulu. Ii-Smartphones ezizama ukufumana indawo yentengiso egcweleyo ngokunikezela ngokusebenza okuphezulu ngexabiso elifanelekileyo. I-OUKITEL ibisoloko ivakala ngaphezulu kwezinye iifemu ngokuchanekileyo ngenxa yoku, kwaye iWP2 ngumzekelo walonto.
Kwicandelo le- "all-terrain" ii-smartphones, akwanelanga ukubonelela ngokutywina okuhle. Inkqubo ye- I-OUKITEL WP2 iqinisekisiwe yi-IP68 nangokhuseleko lokhuselo. Kodwa oku akwanelanga ukuyenza ibonakale. Kufuneka kwakhona ibe yi-smartphone efanelekileyo kwiinkalo ezininzi, kwaye iWP2 ibonisa izizathu ezininzi zokuqwalaselwa.
Ine- Iprosesa yeMediaTek MT6750, isixhobo se ii-cores ezisibhozo ezibaleka kwi-1,5 GHz ngokuthelekiswa ngokupheleleyo kwaye esele inike iziphumo ezilungileyo kumashishini afana neOppo, Asus, ZTE okanye iUlephone. Igcina isixhobo sihamba ngokuthembekileyo kwaye ngaphandle kokungqubana nokwenza nawuphi na umsebenzi okanye ngawo nawuphi na umdlalo. Asiyi kuphoswa ngumbane, kwaye ngekhe siqaphele ubushushu.
Ukuze iprosesa elungileyo inyuke ukuya kwinqanaba, kubalulekile ukuba nenkxaso yememori ye-RAM elungileyo. I-OUKITEL WP2 inayo Imemori ye-4 GB ye-RAM, ezizaliswe ngokugqibeleleyo sisakhono se Ukugcinwa kwangaphakathi kwe-64GB. Ngaphezulu kwenani elaneleyo lokuba le smartphone isebenze ngokumangalisayo, kwaye siyangqina ukuba iyasebenza.
Ukubeka ikhonkco kwicandelo elifanelekileyo le-hardware sijonga kwifayile ye- GPU. Sikwazile ukonwabela imizobo esemgangathweni ngokuvavanya iWP2. Kwaye oku kuyabulela ku I-ARM Mali-T860 MP2, igrafu enamava amaninzi anakho ukubonelela ngeziphumo ezilungileyo kakhulu.
I-Android 8.0 Oreo enebrashi yokubetha
Sitshilo kwaye sayiphinda kaninzi ngokungapheliyo, siyayithanda i-Android njengoko injalo. Inkqubo esebenza ngcono esebenza njengekhubalo. Kwaye ngamanye amaxesha ngenxa yomaleko ongonwabisiyo wokwenza ngokwezifiso unengxaki yokuhla. Kukho iifemu "ezibumba" i-Android zibe zezazo, kwaye zilawule ukubonelela ngemveliso enomtsalane. Umzekelo ocacileyo yi-MIUI, uluhlu lukaXiaomi.
Kwi-OUKITEL WP2 asikwazi ukufumana i-Android ecocekileyo. Kodwa kufuneka sitsho ukuba, ngenxa yakhe Uluhlu lokwahlulahlula lungenabuncinane. Ayisihambi ngaphezulu kweempawu ezimbalwa ezinemiphetho yentsimbi. Sikwafumene i "Ityala lesixhobo" ngezicelo ezahlukeneyo ezinokuba luncedo njenge ikhampasi, un inqanaba, kunye nabanye ukwenza imilinganiselo.
Njengoncamathelisi sinokongeza oko ngaphakathi kwimenyu, kwezinye izicelo zefektri esizifumeneyo ezinye iisetingi ezikwiMandarin Chinese elungileyo. Akukho nto ibalulekileyo, kodwa kubonakala ngathi yimpazamo encinci yokuguqula eya kuthi ngokuqinisekileyo ikwazi ukulungisa kuhlaziyo oluzayo.
Ngaba sele ikuqinisekisile? Apha unokufumana i-OUKITEL WP2 kwiAmazon elona xabiso libalaseleyo
Ukufota ekuphakameni okuseleyo
Sifikile kwicandelo lokufota le-OUKITEL WP2. Siye sabona indlela Kweli candelo, ii-smartphones zemimandla yonke ziye zavela kakhulu, Ngethamsanqa. Ekuqaleni, olu hlobo lwefowuni lwacingelwa ukuba lukwazi ukumelana nezothuso kunye namanzi. Ukugxila kwinxalenye enkulu yeempawu zayo eziphambili kuxinano kunye nokumelana.
Kodwa njengawo onke amacandelo ngaphakathi kwintengiso ye-smartphone, eli liye lavela kwakhona. Ukongeza ekuphuculeni nangakumbi kwezona zinto zichongiweyo, sibona ukuba abavelisi baya besanda njani na kubaluleke kakhulu kwizinto ezinje ngokufota. Into engenzi nto ngaphandle kokunika ixabiso elikhulu kwezi Smartphones zikhethekileyo.
Kule meko, ziindaba ezilungileyo ukubona oko I-OUKITEL ixhotyise i-WP2 ngekhamera ezimbini. Ukongeza, ukuqinisekisa iziphumo ezonelisayo babheje kwi-inshurensi. Yiyo loo nto sibona ukuba zombini isivamvo sensimbi yekhamera yangemuva, njenge isivamvo camera ngaphambili Ityikityiwe ngu Samsung.
Kulo ikhamera esemva sine Inzwa ye-16 megapixel isocell sensor, i Isamsung S5K2P7. Isinika ukuvula okujolise kuko 2.0 kunye ne-ISO 100 - 1600. Kwaye iyancediswa yintsingiselo yoluvo 2 megapixel yesibini. Ngokudibeneyo benza ikhamera ezimbini ezikwaziyo ukuhambisa iziphumo ezinkulu.
En Iifoto zasemini ekukhanyeni okuhle sibona iziphumo ezilungileyo ngokwenene. Inkqubo ye- Inkcazo yemibala ikwinqanaba elihle kakhulu ngombala webala okwenyani. Kwaye i inkcazo yobumesy ukwenziwa ayinanto yakwenza nekhamera elungileyo.
Ukuba sidubula imbonakalo yomhlaba, sikwafumana ubukhali obuhle nakwezona zinto zikude. Nangona kukho i-latent ilahleko encinci yomgangatho xa ndisandisaukubamba. Ngokubanzi, ikhamera ye-OUKITEL WP2 iyakhuphisana kwaye iyakwazi ukuhambelana nayo nayiphi na imeko.
Ukusetyenziswa kwekhamera kunye nezinto ezinokwenzeka
Kwisicelo sekhamera sikwazi ukufumana ubumbeko oluncinci kunokuba bekulindelwe. Asiyi kuthi sisicelo esingaphelelanga, kuba inayo yonke into esinokuyidinga. Kodwa ukhetho olunikezelayo lubaluleke kakhulu. Unokukhetha uhlobo lwe Ama-20 okanye ama-40 aqhume ngokudubula ukudubula ngomzuzwana.
Sinokukhetha kwakhona ubungakanani befoto Ukukhetha ezona pixels zininzi zesisombululo. Okanye ukhethe kwi iindlela ezahlukeneyo ifoto oyibonayo. Phakathi kwabo sifumana, ukongeza kwividiyo, ubuhle bobuso, ifuthe elidumileyo lokufiphala (apha elibizwa ngokuba yi "Blur"), mnyama nomhlophe, okanye ipanoramic.
Kwaye sinokukhetha phakathi Iifilitha ezisibhozo ezahlukeneyo esinokuyisebenzisa kwikhamera ngaphambi kokuba kudutyulwe. Siyabona ukuba ifoto ingabonakala njani ngaphambi kokuyithatha. Ukhetho alusileli, kodwa njengoko sisitsho, ukufikelela kuqwalaselo kungaphelelanga.
Asinakho ukungahoyi kwicandelo lokufota I-4-LED enamandla iWP2 inayo. Umnxeba Amandla amakhulu e-flashlight lelona flash linamandla onokulufumana kwi-smartphone. Iya kunika ukukhanya kwiifoto zakho nkqu nakwiimeko zobumnyama obupheleleyo. Yintoni egqithisile, iphindwe kabini njengethotshi enamandla esinokuyisebenzisa nokuba inqanaba lebhetri lingaphantsi kwe-5%. Anjalo ke amandla ayo umvelisi wawo ecebisa ukuba angajoli ngqo emehlweni.
Ibhetri ukunika kunye nokuthatha
Ibhetri yile Olunye lweempawu ezibonakalayo ze-OUKITEL. Eyaziwayo phakathi kwezinye izinto ezininzi zokubonelela ngezixhobo zayo ngeebhetri zesisa ezibonelela ngokuzimela okukhulu. Kwaye i-OUKITEL WP2 ayisiyiyo eyahlukileyo. Sijongene ne ibhetri enkulu ye-10.000 mAh. Umthwalo ophindwe kathathu obonelelwa zezinye izixhobo.
Kulungile ukwazi ukuba ukongeza kwisikhundla esinjalo, Unetekhnoloji yokutshaja ngokukhawuleza, ukuze sonwabe Ubomi bebhetri eyi-100% ngaphezulu nje kweeyure ezimbini. Kwaye ukubona amanani anikezelwa ngumenzi, iba yinto ebalulekileyo kwabo bafuna i-smartphone ekwazi ukulandela isantya esifunekayo.
U-OUKITEL ubanga ukuba ibhetri yeWP2 yile iyakwazi ukumelana nokufikelela kwiintsuku ezingama-42. Ikwaxhasa Iiyure ezingama-50 zokusetyenziswa kwefowuni. Kude kube Iiyure ezili-15 zokudlala kwakhona ngaphandle kweziphazamiso. OKANYE Iiyure ezingama-66 zidlala umculo ingayeki. Ngaphandle kwamathandabuzo into yokuba ezinye izixhobo zinokubonakala ngathi yintsomi yesayensi. Kubonakala ngathi singonwabela ngaphandle kwempelaveki ngaphandle kokukhathazeka ngetshaja.
Enye yeengxaki ezincinci esihlala sizibeka kolu hlobo lwesixhobo sikwi Kunzima ukususa i-tab ekhusela isinxibelelanisi iyalayisha. Iyaqondakala into yokuba ikho ukuzalisekisa umsebenzi obalulekileyo wokugcina uxinano. Kodwa akulunganga ukuba siyisuse ngalo lonke ixesha kufuneka sibize okanye sidibanise. Eyona nto iya kuba kukutshaja ngaphandle kwamacingo kwaye, kwitshaja engenazingcingo nayo.
Isandi kunye nokongezwa
Kwicandelo lesandi, i-OUKITEL WP2 ihamba kancinci kwi-tiptoe. Ubuncinci ngokwamandla kunye nesandi sangaphandle. Ibe isithethi esinye emi ngasemva. Indawo engabonakali ifanelekile kuthi. Ifowuni ephumla etafileni isandi sinodaka, kwaye ukuba sinaso esandleni sethu sibukele ividiyo kulula ukuba igutyungelwe ngokupheleleyo.
Ewe umgangatho wesandi kunye namandla Iyahlangabezana nemigangatho emincinci ukuze singabi nasiphoso. Sithanda kakhulu ukubona ukuba i-OUKITEL ikhethe ukongeza Umamkeli werediyo ye-FM. Kodwa ngendlela efanayo kufuneka sibethe ngempama ezindlebeni kuba asinazo ii-headphone eziyimfuneko ukuba zisebenze njenge-eriyali.
Kukwaphawuleka, njengoko besiphawulile ekuqaleni, Ukucinezelwa kwegalelo le-jack ye-3.5 mm. Nangona sinokudibanisa nayiphi na iseti yentloko ngombulelo kwiadaptha ebandakanywayo ehambelana nezibuko le-USB Type C. Singakulibala ukumamela umculo ngelixa ifowuni ihlawula. Kubonakala ngathi abavelisi baya "besinyanzela" ukuba sibenentloko zeBluetooth. Ngakumbi xa sisebenzisa olu hlobo lwefowuni ngokukhusela kunye nokugubungela kumazibuko abo.
Izinto ezongeziweyo ezidibanisa
Nangona sikhankanyile ezinye iingxaki ezincinci kwicandelo lesandi, enkosi kwezinye izinto ezongeziweyo i-OUKITEL WP2, ezi ziyahlawulwa. Enye yeetekhnoloji ezibalulekileyo ezixhotyiswe ngazo iWP2 kukudityaniswa kweNFC. Into ethi, nangona ingeyonto intsha, abavelisi abaninzi bayathandabuza ukuyifaka. Kwaye ukuyenza yenza ukuba isixhobo sigqibe ngakumbi kwaye sibe nezinto ezahlukeneyo.
Ewe kunjalo, asinakuyihoya into yokuba nangona sijamelene "nefowuni eyonakeleyo", injalo Isiqinisekiso se-IP68. Ayingabo bonke abavelisi bee-smartphones ezirhabaxa abanobuganga bokuthembela kumagama athi "submersible H2O". Isibhengezo seenjongo sisekwe kwi Ukuchaswa okuqinisekileyo kokuntywiliselwa emanzini ukuya kuthi ga kwimitha enesiqingatha. Ukongeza ekuchaseni uthuli kunye nezothuso. Ngaphandle kwamathandabuzo into eyongezelelweyo ebalulekileyo esenza ukuba silibale ezinye iintsilelo ezincinci.
"Ukulunga" kunye "neengozi" ze-OUKITEL WP2
Lixesha lokuba sithethe ngezona sizithandayo, kwaye nezo zinto, ngokoluvo lwethu, kukho indawo yokuphucula. Simele sitsho ngokuthanda iWP2 ukuba kunjalo i-smartphone elungeleleneyo. Kuba ihlawula iziphene ezinokubakho okanye ubuthathaka ngamanye amandla. Ke ngoko, ngokubanzi uluvo luqinisekile, kodwa njengesiqhelo, igumbi lokuphuculwa kwezinye iindawo.
La Isiqinisekiso se-iP68 Yinto esinethemba lokuyibona kuyo yonke indawo ye-smartphone, nangona sibonile ukuba ayingabo bonke abanayo.
Ewe kunjalo enkulu ibhetri eyi-10.000 mAh ibalwa ngayo. Inani elenza i-OUKITEL WP2 ifowuni erhabaxa kunye nebhetri enkulu kwintengiso. Yalatha u-OUKITEL.
La Unxibelelwano lweNFC, into engaziwa ngabaninzi, kwabanye ngumgangatho obalulekileyo, kuxhomekeke kwizinto eziluncedo esinokuthi sizinike ifowuni. Kwaye ukuba nayo yongeza imiba elungileyo ngokubhekisele kwizinto ezahlukeneyo.
10.000 mAh umthamo webhetri
El ubunzima obuphezulu kunye nobukhulu obukhulu Kubonakala ngathi azicacanga kwezi ntlobo zeefowuni, nangona sibonile ukubheja okuncinci kakhulu. Nangona inkangeleko yomzimba ingabalwa kangako kweli candelo lentengiso, akulunganga ukuyishiya ecaleni.
La Ukususwa kwe-jack jack eyi-3.5mm nanamhlanje kubonakala ngathi kusilele. Into eya kuba yinto engabalulekanga xa umenzi enesibindi sokuhlawula ngokudibanisa ii-headphone ezingenazingcingo.
El umfundi weminweAsithandi ngenxa yezizathu ezibini. Siqala ngokuthetha nge indawo engeyiyo kwaphela. Kodwa amanqaku amabi ngakumbi xa siqinisekisile ukungasebenzi kakuhle. Ngokwenene yenze kakuhle amaxesha ambalwa ngokufunda ngokuchanekileyo. Inkangeleko ephuculweyo kakhulu.
Ubunzima High kunye nobukhulu
Ukufakwa kwe-headphone mini jack
Indawo engafanelekanga kunye nengachanekanga yokufunda iminwe
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Reviews » Hlaziya i-OUKITEL WP2, enye erhabaxa nebhetri engenasiphelo